Wix wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud u sameysato degelkaaga waana bilaash | Abuurista khadka tooska ah
Ciise Arjona Montalvo | | Naqshadeynta Webka, Dulucda
Wix Waa a madal abuurista degel bilaash ah y fududahay in la isticmaalo. Aqoon farsamo looma baahna haba yaraatee oo bogagga shabakaddu waa 100% mashiinka raadinta saaxiibtinimo. Tifatiraha la isticmaalay waa mid aad u fudud in la isticmaalo, wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad ku abuurto boggaaga sida aad rabto, iyada oo loo marayo tafatiri oo hoos u dhig tifaftiraha. Si fudud u dooro cunsurrada aad rabto inaad ku darto (sawirrada, qoraalka, foomka xiriirka, iwm.), Oo ku soo jiid meesha aad rabto boggaaga dhexdiisa. Ma fududaan karin !. Halkan waxaan ku tusaynaa fiidiyow sida ugu fudud ee loo qaabeeyo websaydhkaaga.
Waad dooran kartaa inaad abuurto boggaaga adoo isticmaalaya a noocyo badan oo qaab-hawleedyo xirfadaysan loo qaabeeyey, ama waad abuuri kartaa taada bogga xoq Waa adeeg dhameystiran oo kuu oggolaanaya inaad labadiinuba ballaadhisaan meheraddaada oo aad kordhisaan macaamiishaada. Waxaa jira arrimo badan oo ku habboon baahiyahaaga: Dukaammada internetka, ganacsiga, sawir qaadista, Muusikada, Farshaxanka Farshaxanka, iyo makhaayadaha.
Caadi ahaan, qiimaha sameynta iyo dayactirka bogga adeegsiga horumariye xirfadle ah ayaa ku kici kara boqolaal, Ama ilaa kumanaan yuuro. Tifatiraha Wix waxaa loogu talagalay inuu ahaado sida ugu macquulsan uguna macquulsan, sidaas darteed qof kasta oo kombuyuutar leh wuxuu fursad u heli karaa sameyso degel kuu gaar ah.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad isticmaasho Wix bilaash ah, ilaa intaad rabto iyo inaad sameyso inta bog ee aad rabto. Haddii aad rabto inaad websaydhkaaga u qaaddo heerka ku xiga, waxaad u rogi kartaa mid ka mid ah qorshooyinka Premium ee kuu oggolaan doona ku xir shabakadaada, ka saar xayeysiiska Wix iyo inbadan. Si aad wax badan uga ogaato qorshayaasheena la heli karo ee Premium, dhagsii Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Dulucda » WIX waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud ugu sameysato degelkaaga gebi ahaanba waa bilaash
Waa inay tilmaamaan in kani yahay xayeysiin oo uusan kaliya aheyn maqaal, sida wadamada qaar ay la sameeyaan youtubers markay dib u eegis ku sameynayaan waa inay muujiyaan haddii ay jiraan maalgelin nooc kasta oo ka mid ah sumadda la soo sheegay, ilaa xad waa anshax darro in aan sheeg.
Jawaab Cristian Rodriguez
Waan ka xumahay inaan kuu sheego laakiin maahan xayeysiin, sidoo kalena wax lacag ah nooma aysan siinin tan.
Waxaan u maleynayaa inay aalad fiican u tahay kuwa aqoonta yar u leh horumarinta websaydhka, waana laga yaabaa inay dadka qaar waxtar u yeeshaan.
Aniguna waxaan ku celinayaa, waxba lama soo oogin
Sida saxda ah loo qaabeeyo nooca halbeegga astaanta